I-9 iiapps zasimahla zokukhetha iiphalethi zombala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ii -apps ezisimahla ze-9 zokukhetha iiphalethi zombala
Ngaba ujonge umbala wemibala efanelekileyo yoyilo lwakho? Ezi zilithoba izicelo ezikhululekile ziya kuba luncedo kuwe ngokuqinisekileyo.
Njengoyilo lwegraphic, umbala sesinye sezigqibo ezibaluleke kakhulu izakuthathwa. Kodwa sihamba njani ngokudala umbala opheleleyo wombala woyilo lwethu?
Eziapps zinokukunceda ukhethe iphalethi efanelekileyo, ukwenza uyilo lwakho lubonakale luhambelana kwaye lutsala amehlo. Iindaba ezilungileyo kukuba ezi zixhobo zikhululekile.
1 I-Adobe Kuler CC
4 Umbala wokuzingela
8 Umbala woMhloli
9 Umbala Hunter
I-Adobe Kuler CC
I-Adobe kuler sisixhobo esikwi-intanethi esenziwe yiAdobe. Esi sixhobo ivumela ukuvelisa iiphalethi zombala ukusuka kumbala osisiseko esazisa ngawo, nokuba kungokufaka ikhowudi yemibala ye-hex okanye amaxabiso e-rgb. Ukusuka kulo mbala wesiseko, i-adobe kuler iya kuvelisa umbala wombala ngokuxhomekeke ekubeni sifuna le mibala kwiphalethi ibe yi-analog, monochromatic, triad, complementary, composite, okanye ithoni, okanye sinokwenza umbala wombala wesiko.
Nje ukuba sibe nephalethi yethu ekhethiweyo, sinokuyigcina, sabelane ngayo kwaye siyilayishe ezantsi ukuze siyisebenzise kwiinkqubo ezinjengefotoshop kunye nemifanekiso.
Colorzilla Yiyo Ukongezwa kwesiphequluli se-Chrome kunye ne-Firefox ukunceda abaqulunqi ngemisebenzi enxulumene nombala, Zombini ezisisiseko kunye nezaphambili. NgeColorZilla ungayifumana ikhowudi yemibala ye-hexadecimal naphi na kwisikhangeli sakho, uhlengahlengise loo mbala kwaye uncamathisele kwenye inkqubo. Unokuphonononga iphepha, ujonge umbala wombala, kwaye wenze iigradients eziphambili.
Kholwan.co Isicelo sewebhu ukuba inikeza indlela engaqhelekanga yokufumana umbala wombala ofanelekileyo. Ngokusisiseko, ngalo lonke ixesha ucinezela ibha yendawo kuvela iphalethi entsha, ke umbono kukuqhubeka de ufumane eyona ilungele uyilo lwakho. Ngaphandle koko, unokukhangela kwiiplette ezahlukeneyo abanye abasebenzisi abazifumeneyo nabazithandayo.
NjengeCoolers.co, Umbala wokuzingela unikezela ingqokelela yemibala yemibala, ehlaziywa mihla le. Yongeza ulwandiso lwayo kwiChannel kwaye uza kufumana umbala wephalethi omtsha ngalo lonke ixesha uhlaziya iwindow yakho.
Efanelekileyo sisixhobo sokwenza umbala wephalethi esiphuhliswe zii-imeyile ezinkulu zentengiso zeMeyileChimp, ekuvumela ivumela ukuvelisa iphalethi yombala kuyo nayiphi na ifoto okanye umfanekiso, kwifomathi yePNG, JPG okanye yeGIF. Ikwabonelela ngeengcebiso zemibala efanayo yemibala kwaye ikuvumela ukhuphele isampulu yephalethi oyikhethileyo.
ICopaso ngumvelisi wombala wephalethi oqhubela phambili ovela kwi-COLORlovers kuluntu loyilo. Ujongano lwecopaso luya kuthi ikuvumela ukuba wenze iskimu sombala ngeendlela ezintathu-Khetha imibala, layisha imifanekiso, okanye faka amaxabiso e-CMYK okanye e-HEX. Ungagcina kwaye upapashe iiphalethi zemibala yakho, kwaye unokongeza amanqaku kwiphepha ngalinye lombala owenzayo.
I-Paletton sisixhobo sokuyila sokwenza imibala yeepeyinti ezidityaniswa kakuhle. Uqala ngombala osisiseko kwaye iPaletton ivelisa imibala efanayo eyizalisekisayo.. Ngale ndlela, usetyenziso lwewebhu luyakukukhokela ekudalweni kombala wombala woyilo lwakho ngokusekwe kwisitayile esinye ezintlanu abasibonisayo, abayibiza ngokuba yi "Mono, Complement, Triad, Tetrad kunye neFree Style".
Umbala woMhloli Yiyo simahla kwi-intanethi ibhokisi yezixhobo yoyilo kunye nokusebenza ngemibala yeephalethi. Iphuhliselwe abaqulunqi abaziingcali, icolorexplorar ibisoloko ikhula ukusukela ngo-2006 kwaye zonke izinto zayo zisimahla ukuba zingasetyenziswa. Oku kubandakanya ukuhambelana kombala; Uphendlo lwethala leencwadi elidumileyo; Iingcebiso malunga nokuguqula phakathi kweelayibrari zemibala emininzi (iRAL, TOYO, kunye nokunye); Iphalethi yokuthumela ngaphandle isetyenziswe kwisoftware enjengeFotohop, i-Illustrator, kunye ne-InDesign; Uhlalutyo lwepeyinti yombala kunye nokungeniswa kwemifanekiso kunye neefayile ezibhaliweyo; Kunye neepelethi ezigciniweyo ukufikelela ngokulula.
Umbala Hunter sisixhobo esisekwe kwisikhangeli esikuvumela ikuvumela ukuba ufumane kwaye wenze imibala yemibala eyenziwe kwimifanekiso. Mane ulayishe umfanekiso wakho kwaye uza kufumana umbala wombala osekwe kwimibala eyiqulathileyo.
Ngenye indlela, ungangena ixesha lokukhangela kwibhokisi ephezulu kwiphepha; Umbala woMzingeli uya kukhangela iFlickr kwimifanekiso ehambelanayo kwaye ayisebenzise ukwenza umbala wombala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ii -apps ezisimahla ze-9 zokukhetha iiphalethi zombala
Itheyori encinci yemibala
Imigaqo ujongano yoyilo lweselfowuni